musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Actor Nyeredzi muNew Tourism Firimu yemari yeAEE
John Cena akabatana neDhipatimendi rezvetsika uye Tourism Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) pamushandirapamwe wayo mutsva wekushanya, achikurudzira vafambi kunyorera rwendo kuenda kuguta guru - "stat."
Kutevera vhidhiyo yetiyeya yakatangwa svondo rapfuura, firimu rakazara rakaburitswa nhasi rinoona Cena achisiya hurongwa hwake hwekufamba mushure mekuverenga nezve Abu Dhabi pakubhururuka kwake - achiratidza chaizvo nei Nguva Yave Kushanya. Chaizvoizvo kukwira mune zvese izvo nzvimbo yekuenda inofanirwa kupa, Cena maparachuti anobuda mundiza uye anogara padenga remufananidzo weLouvre Abu Dhabi. Vhidhiyo yacho inoratidza shiri-ziso rinotarisa rwendo rwaCena kuburikidza nenzvimbo dzinoyevedza dzaAud Dhabi, zvinokwezva zvemakiromita epasi uye nharaunda inonakidza yevaraidzo.
Inzvimbo yegore rose yezuva uye nzvimbo yakakwana yezuva rechando, Abu Dhabi inopa nyika munzvimbo imwechete - yakanakira vafambi vanotarisa kufambisa kudzungaira kwavo uye kugadzira ndangariro nyowani. Kubva pane dune bashing murenje kusvika pakuzorora pamhenderekedzo dzayo dzakajeka, kutora hunyanzvi hwayo uye hwazvino hunyanzvi uye tsika tsika, kana kuongorora zvakawanda zvinonakidza zvemhuri nemapaki emusoro - kune nyika yekugona kuwana panguva yekuenda ku Abu Dhabi .
Iyi firimu yakaburitswa zvichitevera chiziviso chekuti Abu Dhabi iri kugamuchira vese vafambi vekunze nevaya vanofamba kubva kuGreen List nyika vachidzokera kuEmirate, pasina chikonzero chekuisa wega.